WFP Yopemha Zvakare Mari Inodarika Mamiriyoni Zana eMadhora ekuAmerica
Sangano reUnited Nations rinoona nezvechikafu pasi rose, reWorld Food Program, kana kuti WFP, rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rikashaya mari rariri kuda kupa vanhu ava chikafu.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemukuru weWFP, kana kuti Assistant Executive Director, Muzvare Valerie Guarneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno, kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Muzvare Guarneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara, zvikurusei kumaruwa.
Muzvare Guarneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemudhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti kuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane, isakwane kutenga zvakawanda.
WFP iri kupa madhora ekuAmerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanise kuzviraramisa.
Mumiriri weWFP muZimbabwe, VaEddie Rowe, vati kana vemasangano anobatsira pamwe nevanhuwo zvavo vakakwanisa kuvapa mari yavari kuda, vanogona kusvitsa chikafu kuvanhu mamiriyoni mana nezviuru zana kusvika vanhu vakohwa.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe.
Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosera paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP.
Gurukota rezvekurima, VaPerrance Shiri, vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Asi mumiriri weNorton muparamende, VaTemba Mliswa, vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe haisati yambotarisana nenzara yakaita seye rwendo rwuno, uye dzinotarisira kuti huwandu hwevanhu vachada rubatsiro gore rino huchakwira kudarika pahuri pari zvino sezvo vanhu vakawanda vachatadza kuita goho rakanaka.